အပင်များသည်ခြောက်သွေ့စက်ကိုခြောက်သွေ့စေပြီး Tsix DPHG080S-G ကိုခြောက်သွေ့စေသည် | Twesix
Moringa သည် dehydrator မှထွက်ခွာသည်
၏အမှုန့် ခြောက်သွေ့သော Moringa အရွက်များလေ့ရှိသည် အချိုရည်နှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များအဖြစ်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ, သီရိလင်္ကာနှင့်အာဖရိကရှိအချို့သောနိုင်ငံများနှင့်အာဖရိကရှိအချို့သောနိုင်ငံများမှအချို့သောနိုင်ငံများမှထွက်နေသည့် Moringsix Moringa ခြောက်သွေ့သောအပူချိန်တွင်ခြောက်သွေ့သောအပူချိန်တွင်ခြောက်သွေ့သောအပူချိန်တွင်ခြောက်သွေ့စေနိုင်သည်။ အရောင်နှင့်အာဟာရ။ Moringa ရွက်များ၏ရနံ့ကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးအာဖရိကမှဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံများမှ0ယ်ယူသူများကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို0ယ်ယူရန် Moringa Dryer ကို0ယ်ယူခဲ့သည်။
Moringa မှထွက်ခွာသွားပုံ တေွ့ အခြောက်လှန်းစက်
1. ကောင်းသော Moringa ကိုအရွက်များကိုရွေးချယ်ပြီးဆေးကြောပါ။
2. စင်ကြယ်သော Moringa ကိုအရွက်များအနေဖြင့်ဗန်းသို့ထွက်ခွာသွားပါ,
3. အပူချိန်ကို 30-55 ဒီဂရီဂရမ်နှင့်ခြောက်သွေ့သောအချိန် 6-10 နာရီတွင်ထားပါ
4. 6-10hours ပြီးနောက်အရွက်များသည် crips ဖြစ်လာသည်။ ခြောက်သွေ့သောအရွက်များကိုအမှုန့်ထဲသို့ကြိတ်ခြင်းမပြုပါက,
ခြောက်သွေ့သောအချိန်သည်ဗန်းတွင်မည်မျှပြင်ဆင်သည်နှင့်အရောင်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်မှာမူတည်သည်။ အကယ်. ဗန်းတွင်အရွက်များလျော့နည်းသွားပါကခြောက်သွေ့သောအချိန်သည်တိုတောင်းသည်။ ထို့အပြင်အရောင်အစိမ်းရောင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားလိုပါကခြောက်သွေ့သောအချိန်သည်ပိုကြာလိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပူချိန်နိမ့်သတ်မှတ်ထားလို့ပဲ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ, ကျေးဇူးပြု. ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းအားကိုဆက်သွယ်ပါ။
Moringa သည်ခြောက်သွေ့သွားစေသည် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရေခန်း အခြောက်လှန်းစက်